Iinkqubo-buchule zeNtengiso zaseKhaya zaMashishini aMashishini amaNinzi | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 4, 2021 Lwesine, ngoFebruwari 4, 2021 UMandeep Chahal
Ukusebenza ngempumelelo ishishini elinendawo ezininzi kulula… kodwa kuphela xa unelungelo basekuhlaleni Isicwangciso sentengiso! Namhlanje, amashishini kunye neempawu zinethuba lokwandisa ukufikelela kwabo ngaphaya kwabathengi bendawo ngenxa yedijithali. Ukuba ungumnini webhrendi okanye umnini weshishini eUnited States (okanye naliphi na ilizwe) ngesicwangciso esiliqili unokufaka iimveliso kunye neenkonzo zakho kubathengi abanokubakho kwihlabathi liphela.
Khawufane ucinge ngeshishini elinendawo ezininzi njengomlilo wenkampu apho unehabhu enye enkulu (okanye i-bonfire) kunye neendawo ezincinci zokuthengisa zentengiso. Sebenzisa olu lwakhiwo, kuba lula ukufikelela kumthengi kanye apho bahlala khona.
Ulawula njani ishishini elinendawo ezininzi ngaphandle kokutshisa amaqela akho?
Hlela -Ukugcina imisebenzi yemihla ngemihla, ikhefu labasebenzi, kunye nezicelo zabathengi, kuya kufuneka uthathe indlela emiselweyo. Kuya kufuneka ubeke emgangathweni iinkqubo zokusebenza hayi indawo enye kuphela- kodwa kuzo zonke iindawo zeshishini lakho.
Ulawulo (ii) lubulala -Ukhile abasebenzi abomeleleyo abanokuthi baqhube ishishini elinendawo ezininzi okanye balonakalise. Kubalulekile ukuthatha ixesha lokuqesha abaphathi abanezakhono ukuqinisekisa ukuba iivenkile zakho ziqhuba ngendlela ofuna ngayo. Musa ukuwajongela phantsi amandla ezakhono ezifanelekileyo zolawulo.
uqhagamshelwano Isitshixo sokusingatha iimeko, ukwandisa umbono wakho weshishini, kunye nokwabelana ngexabiso nabathengi lunxibelelwano. Ukugcina unxibelelwano unokunyusa iintlanganiso zeholo ledolophu, iintlanganiso ezibakho kabini ngeveki, kunye nokusondeza iifowuni. Iintlanganiso eziqhelekileyo nezifanelekileyo zinokunceda ukugcina izinto kwisingqi.
EziPhambili Ukuseta eyona nto iphambili ilingana nokugqitywa kweepesenti ezingama-50 zazo zonke iiprojekthi. Ngokophando, amashishini eendawo ezininzi achitha iiyure ezili-18 ngeveki ukuphinda nokucacisa unxibelelwano.
IComradeship - Akukho namnye kuthi onamandla kunathi sonke. Esi sisicatshulwa esimangalisayo kwaye inokuba sisaci sakho, nawe! Xa uqhuba ishishini elinendawo ezininzi, izinto ziba lula kakhulu xa wonke umntu eyazi indima yabo kunye noxanduva lwabo. Yakha umoya weqela olomeleleyo ngokubethelela amaxabiso.
Gcina It Simple Sebenzisa itekhnoloji elungileyo, sebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi, kwaye wenze lula imisebenzi yakho. Ungagcina ixesha elininzi, amandla kunye nezixhobo xa unemephu ecacileyo.
Imiceli mingeni yoShishino lweeNdawo ezininzi
Ukuya kwiindawo ezininzi kunzima. Kulula ukujongela phantsi izixhobo eziyimfuneko kwiiprojekthi kunye nemisebenzi eneshishini elinendawo ezininzi. Ngaphaya koko, ukusilela ukulungiselela inkqubo yeshishini kunye nesicwangciso sokuthengisa sokwanda kunokuchaphazela kakubi ukusebenza kwenkampani ngokubanzi. Eminye yemiceli mngeni exhaphakileyo ejongene namashishini eendawo ezininzi kunye neempawu zezi:
uthethathethwano Izigqibo zeshishini ezingalawulwa kunye nonxibelelwano olungacwangciswanga zinokuthatha umthwalo wazo kwishishini. Ukuba umphathi wakho akanikeli ubunzima obufanayo kwinkxalabo njengoko usenza, amathuba okuba umqeshwa wakho aqale ukuphoswa ngamathuba.
Ubuhlanga Kwishishini elinendawo ezininzi, kunokuba ngumceli mngeni ekwabelaneni ngomfanekiso omkhulu. Ngamanye amagama, kunokubakho ukungabikho komanyano phakathi kwamaqela neeofisi. Emva kwexesha, umhlaba ofanayo uba yindawo yobuhlanga; Unokucinga ukuba kukho iqela elinye elisebenza eofisini. Nangona kunjalo, enyanisweni, kunokubakho amaqela amane amancinci. Gcina wonke umntu kwiphepha elinye okanye kungenjalo kunokukhokelela ekuchithekeni kwezixhobo eziluncedo.
ukwenza - Enye ye-hiccups yeshishini elinendawo ezininzi kukucaca ukuba wenziwa njani umsebenzi! Kuba abasebenzi ababonakali kangako, ukubekwa kweliso kunokuba ngumceli mngeni. Ngaphandle kwenkuthazo rhoqo, unxibelelwano, kunye nokusebenzisana ukusebenza komqeshwa kunokuhla.
Ngelixa ukuqhuba indawo eneendawo ezininzi kunokubonakala kunzima, kunokwenzeka ukuba uphumelele. Unokwenza isicwangciso sokuthengisa sasekhaya kunye nokugcina indawo nganye eqhuba kakuhle. Kukho amaqonga ambalwa akhelwe ngokukodwa ukulawula imisebenzi yeshishini elinendawo ezininzi, ukuthengisa, kunye neenzame zentengiso- qiniseka ukuba wenza umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya ukuqinisekisa ukuba bayayixhasa, bayidibanisa, kwaye bayazisebenzisa izicwangciso ozenzayo kwiindawo zonke.
Kweli nqaku, ndiza kwabelana ngeendlela ezithile onokuthi uzithathe ulawulo lokuthengisa ishishini lakho elinendawo ezininzi.
Iindlela ezilishumi zeNtengiso zaseKhaya zokuThatha iiNkampani eziNinzi zeNdawo yakho ukuya kwiNqanaba elilandelayo
Ukujolisa kugqibo - Nokuba yidatha malunga nemikhwa yabathengi, umsebenzi, kunye nokusetyenziswa kwamaqonga eendaba ezentlalo- ngokujikela kwii-analytics zedatha unokuphakamisa amandla e-geolocation ukwakha ukuqonda okusebenzayo. Ngokujolisa ekujongeni amathemba akho kunye nabathengi, uya kuyonyusa ingeniso yakho iyonke. Ngaphaya koko, unokusebenzisa iindlela ezifanayo zokuthengisa ukufumanisa ukuhlangana kwabathengi nezinye iimveliso zalapha ekhaya.
Iziganeko zaseKhaya -Ngokuququzelela umsitho wasekhaya ungakhuthaza abathengi ukuba bazibandakanye kwaye banxibelelane nophawu lwakho. Iminyhadala yasekuhlaleni yindlela entle yokukhuthaza kungekuphela ishishini lakho, kodwa nokuvula ithuba lokwenza okuhle eluntwini.
Uphengululo lwe-Intanethi -Uphononongo lutshintsho kumashishini endawo. Nokuba uphononongo olubi ludlala indima kwindawo yokubeka uphawu. Indlela ophendula ngayo kuhlolo olubi inokukunceda uguqule umthengi onokubakho abe ngumthengi ohlawulayo.
I-97% yabathengi baqale bafunda uphononongo lwe-Intanethi malunga nemveliso kunye nenkonzo ngaphambi kokwenza iodolo. Phantse iipesenti ezingama-80 zabantu bathemba uphononongo olwenziwa kwi-Intanethi kubathengi bangaphambili.
Ulawulo lweSifa -Namhlanje, ngakumbi nangakumbi amashishini ayakuqonda ukubaluleka kokulawulwa kwegama labo kwi-Intanethi. Amaqonga eendaba ezentlalo afana neFacebook, i-LinkedIn, kunye ne-Instagram zinceda amashishini ukunxibelelana nabathengi abaxabisekileyo. Unxibelelwano phakathi kophawu kunye nomthengi lisebenza indima ebalulekileyo ekuqiniseni eyona ilungele indawo ethile.
email Marketing -Ukuthengisa nge-imeyile kuyaqhubeka nokuba yeyona ndlela isebenzayo yokuthengisa kwasekhaya. Ixhaswa ziimpawu ezinkulu kumashishini amancinci okuqalisa. Iphulo elisebenzayo le-imeyile linokomeleza uphawu lwakho lweshishini / lweshishini kwintengiso. Ngapha koko, ukuthengisa nge-imeyile kukwabonelela ngethuba lokuhambisa iinkonzo ezizenzekelayo kubathengi abakhoyo.
Ukuthengisa uMyalezo obhaliweyo -Ijelo lokuthengisa leSMS likhula ngesantya esihle kwaye ishishini lasekhaya likhokelela kwipakethe yokuzibandakanya. Akukho nto ifana nomyalezo ofike ngexesha kwisixhobo sakho esiphathwayo ukutsala umdla wakho kwisibonelelo sendawo okanye isaphulelo.
Xa kuthelekiswa no-2016, i-23% yabantu abaninzi baya kukhetha ukungena ukufumana imiyalezo ye-SMS evela kwiinkampani ngo-2020. I-82% yemiyalezo ebhaliweyo ifundwe kwisithuba semizuzu emi-5, kodwa abathengi bavule kuphela i-imeyile enye kwi-1 abayifumanayo.
Izalathiso Zengingqi -Abathengi abaninzi banolawulo oluthembekileyo abajonga amashishini kulo. Nokuba kukukhangela kweYelp, uGoogle Maps, iSafeSearch, okanye enye inkonzo, ukugcina indawo yakho yeshishini kunye neenombolo zefowuni zihlaziyiwe kuya kuqhuba abathengi abaninzi baye kwishishini lakho.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando -Ukugcina iwebhusayithi ekhawulezayo, ephendulayo ephathekayo ebandakanya imimandla kunye neempawu ophawuleka kuzo kwindawo nganye ziya kuqhuba ngakumbi ingqalelo kubasebenzisi beenjini yokukhangela abafuna iimveliso okanye iinkonzo zakho. Gcina imali kwiqonga elinokukunceda ujonge ukubekwa kwindawo yokukhangela kwindawo nganye.
Imidiya yokuncokola -Ukugcina ubukho ekujoliswe kubo kunye nokwakha okulandelayo ekuhlaleni kwimithombo yeendaba kunokuqhuba ukugcwala kwendawo kwishishini lakho. Sebenzisa onke amajelo kunye nezitayile zezithuba zemidiya yoluntu-ukusuka kwii-tweets, ii-hashtag, iividiyo, iifoto kunye namabali!
Advocacy -Nika izaphulelo zokudlulisa kwaye uqiniseke ukuba ubambisene neminye imibutho yendawo kunye namashishini ukunceda ukuqhuba ilizwi lomlomo (UMFAZI) ukuthengisa kwishishini lakho. Akukho nto ithembakeleyo kunesindululo somlingane xa kufikwa kushishino lwasekhaya.
Kwaye, ewe, ungarhwebesha abathengi bakho abakhoyo ngokuhambisa izibonelelo ezifanelekileyo, ezenzelwe wena kunye nezasekhaya. Iqonga lokuthengisa kwidijithali lilungile ekuncedeni ukuba uphinde ujolise kubathengi abakhoyo.
Ukuqhuba ishishini elinendawo ezininzi kufuneka uphuhlise izakhono zokujikeleza kwaye ufunde ukwenza okungakumbi ngexesha elincinci. Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso zikunike isikhokelo!
tags: ku khuthazaemail MarketingIntengiso ejolise kugqatsogeotargetingUphononongo lukaGoogleImikhombandlela yasekhayaimicimbi yasekuhlaleniukuthengisa kwendawoukukhangela kwendawoyendawo seoindawo ezininziishishini elinendawo ezininziUphengululo lwe-Intanethiulawulo lwegamaSEOukuthengisa ii-smsImidiya yokuncokolaukuthengisa imiyalezo
UMandeep Singh, umsunguli we-SEO Discovery, inkampani ehamba phambili yokuthengisa yedijithali ngumkhankaso onamava kwicandelo lentengiso ye-SEO kunye neqonga lokuthengisa kwidijithali.
Ukuthengisa okukufuphi kunye neNtengiso: iTekhnoloji kunye neTactics